Rev. Soe Moe Nai – Full Gospel Assembly
Rev. Soe Moe Nai
ဆရာစိုးမိုးနိုင်ကဟာ ဘုရားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး ဧဝံဂေလိ၊ အသင်းတော်ရဲ့ Home cell တွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆက်ကပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဟာ ဘုရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည့်အလား ပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်ကာ သူနှင့်သွားလာလုပ်ကိုင်သူတိုင်း ပျော်စရာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အထူးသဖြင့် အသင်းတော်၏ နာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင်လည်း နှံ့နှံ့စပ်စပ်ပါဝင်ကာ အမှုတော်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာစိုးမိုးနိင်ကို အဖ ဦးဂိုခန်ထောင်းနင့် အမိ ကျင်းလန်းကျင်တို့မှ ဟားခါးမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးကို အထက်တန်းထိတက်ရောက်ခဲ့ပပြီး၊ ၁၉၉၅ ခုနစ် ဇန်နဝါရီ လ(၁ဝ)ရက်နေ့ တွင် ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှုရရှိခဲ့ကာ ၁၉၉၅ ခုနစ်မှာ အမှုတော်မြတ်တွင် ပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။
၁၉၉၇ ခုနစ်မှာတော့ Full Gospel Bible Training center အပတ်စဉ် (၂) တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၇ စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့ တွင် လက်တင်ရ မင်္ဂလာကို လက်ခံရရှိပါသည်။
သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည်သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည်တောင်းချင်သမျှကို တောင်း ၍ရကြလိမ့်မည်။